न पढ्ने छन्, न पढाउने - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Featured Headline1 Main News National social Socity राजनीति स्थानीय न पढ्ने छन्, न पढाउने
न पढ्ने छन्, न पढाउने
Marganugamidaily प्रकाशित समय 12:33:00 AM
सिरहा । यो हो सिरहा सदर मुकाम स्थित सूर्यनारायण सत्य नारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पस । २०३९ सालयता यसले मधेशमा धेरैलाई दीक्षित बनायो । २०६२ सम्म यहाँ राम्रो पढाइ हुन्थ्यो । वरपर जिल्लाका विद्या र्थी पढ्न आउँथे । अब यो क्रमशः खण्डहर मा परिणत भएको छ ।
यस क्याम्पसमा विद्यार्थीले पढाइ नहुने समस्या एक दिन मात्र होइन, महिनौंदेखि झेल्दै आएका छन् । अधिकांश अध्यापक यहाँ पढाउन छाडेर निजीतिर धाउँछन् । उनीहरू हाजिर गरेर टाप कस्छन् ।
बीए, बीएड, बीबीएस, बीएड आईसीटी, बीएससी र स्नातकोत्तर सहित विद्यार्थी संख्या १ हजार १७ छ । तर, दैनिक रूपमा पढ्न आउने विद्यार्थी न्यून मात्र छन् । उनीहरूलाई पढाउन एक प्राध्यापक, २० सहप्राध्यापक, २६ उपप्राध्यापक, ११ शिक्षण सहायक (करार), एक उपप्रशिक्षक र १२ आंशिक अध्यापक छन् । कर्मचारी २६ जना छन् । पढाइ भने नाम मात्रको छ ।
धनुषा जनकनन्दनी–१ फूल बरियाका नीरजकुमार यादव डेरा लिएर सिरहामा बस्छन् । उनी बीबीएस दोस्रो वर्षमा पढ्छन् । दुई महिनादेखि कक्षाकोठामा एक्लै रहेको उनले सुनाए । ‘डेरा गरी बस्नुपरेको छ, क्याम्पसमा पढाइ हुँदैन , उनले भने, ‘क्याम्पस प्रमुख लाई भन्दा कुरा सुन्दैनन् । शुल्क तिर्नुपर्छ तर पढ्न नपाउने अवस्था छ ।
अध्यापकहरू समयमा कहिले पनि नआएको बीबीएस तेस्रो वर्षका अनिलकुमार गुप्ताले सुनाए । गुनासो लिएर जाँदा प्रमुखले उल्टै झपार्ने गरेको गुनासो उनले गरे । ‘परीक्षा नजिकिँदै छ , उनले भने, ‘तर, एउटा विषयमा त एक पेज पनि पढाइ भएको छैन । सबै विषयका शिक्षक आए विद्यार्थी पढ्न आउने उनले बताए ।
बीबीएस संकाय प्रमुख नतोकिँदा पठनपाठनमा कठिनाइ भोग्नुपरेको अर्का विद्यार्थी रामसेवक साफीले बताए । ‘प्रमुख नहुँदा गुनासो र पाठयपुस्तकको समस्या लिएर कहाँ जानु ? उनले भने, ‘त्यो कुरा क्याम्पस प्रमुखलाई सुनाउँदा बेवास्ता गरिरहेका छन् । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको छ । क्याम्पस प्रमुखले केही महिनाअघि कपिलदेव यादवलाई संकाय प्रमुख तोकेका थिए । तर, उनले सम्बन्धित विषय नभएको भन्दै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरे ।
विद्यार्थी पढ्न नआउने गरेकाले पढाइ प्रभावकारी नभए को क्याम्पस प्रमुख कृष्ण कुमार यादवले दाबी गरे । ‘विद्यार्थी नामांकन गराएर बाहिर काम गर्छन्, कोही बाहिर पढ्छन् , उनले भने, ‘विद्यार्थी नियमित आए पढाइ हुन्छ । क्याम्पसका अध्यापक पढाउन बाहिर जाने गरेकोबारे उनले प्रस्ट जवाफ दिएनन् । ‘कुन प्राध्यापक कहाँ पढाउन जान्छन् भन्ने मलाई जानकारी छैन, उनले भने, ‘फुल टाइमर प्राध्यापकले बाहिर पढाउन जाँदा क्याम्पसलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ प्राध्यापकले खबर गर्दैनन् ।
छात्रावास प्रयोगविहीन क्याम्पस को ३२ कोठे छात्रावास १० वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ । २०६४÷६५ मा अनेरास्ववियु र नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता बीच विवाद हुँदा बन्द गरिएको थियो । त्यसयता भवन जीर्ण बन्दै गएको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थी मारमा परेका छन् ।
तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले २०७३÷७४ मा २५ लाख बजेट क्याम्पसलाई विनियोजन गरेकी थिइन् । जिविसले ठेक्का लगाएर काम पनि गराएको थियो । ‘कति काम भयो ? , कति बाँकी छ ? यसबारे थाहा छैन , क्याम्पस प्रमुख यादवले भने, ‘काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण भएको छैन । त्यसैले बाँकी काम क्याम्पसले गरेको छैन ।
परीक्षा भवन अलपत्र परीक्षा भवन पनि अलपत्र छ । निर्माण व्यवसायी र क्याम्पसबीच भुक्तानीबारे विवाद हुँदा काम रोकिएको थियो । त्यो विषय अदालतसम्म पुग्यो । दुई महिनाअघि फैसला भएको क्याम्पस प्रमुख यादवले बताए ।
२०६७÷६८ मा १ करोड लागतमा भवन बनाउन थालिएको थियो । भवनको फाउन्डेसनसहित केही वाल, पिलर निर्माण गरिएको छ । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले ५८ प्रतिशत काम भइसकेको भन्दै त्यसको भुक्तानी मागेका थिए । तर, त्यति काम नभएको भन्दै भुक्तानी रोक्दा विवाद भएको थियो । २०७२÷७३ मा निर्माण व्यवसायीले जिल्ला अदालत सिरहामा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले २८ प्रतिशत मात्र काम भएको र त्योभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको ठहर गरेको उनले सुनाए ।
#Breaking #Featured #Headline1 #Main News #National #social #Socity #राजनीति #स्थानीय